Travel agency Premnitz Rathenow ☀️ Brandenburg ✅ kubva 1998
Svetukira kune zvemukati
Camper - Motorhome yekutsvaga online
Zororo kuGermany - nyika dzemubatanidzwa
AIDA Kwekupedzisira Minute
Bhuka ndege yakarongwa
Bhuka ndege yekutiza
Nhabvu UEFA EURO 2020-2021
Mitambo Olimpiki 2020-2021
Bhazi dzinofamba-bhazi dzinofamba
Rwizi rwunodzika Rhine Main Moselle
Utachiona hunokonzera corona
Mepu yemakona e coronavirus kuGermany
Mepu coronavirus kesi pasi rese
Ethe.de Newsticker Corona
YeMusic.de Newsticker Corona
Mamiriro ekunze ekunze
Kufambisa inishuwarenzi yekufamba inishuwarenzi
Bhuka mota yekurenda
Kugamuchirwa kuna Premnitz naRathenow!
Nekuti Corona dambudziko takugadzirira imwe hotline yakakosha iwe uko isu tinopindura mibvunzo pamusoro pekuitwa uye kubviswa kwe rwendo rwako.
Tipei foni kana kuti titinyorere kuburikidza ne whatsapp.
nhau dzekufambisa dzichangoburwa
rebook remahara uye kukanzura 3. December 2020
Dubai iri kuvaka hotera refu kwazvo pasi rose 16. November 2020
Canary Islands - Negative corona test inosungirwa pakupinda 2. November 2020
Iyo Federal Kunze Hofisi inosimudza yambiro yekufamba yeCanary Islands 26. October 2020
Mahombekombe akanaka kwazvo pasi rose 2020 28. September 2020
Nyika dzisina yambiro yekufamba 18. September 2020
Yambiro yekufamba kune dzimwe nyika makumi matatu nesere inofanirwa kusiyiwa 17. September 2020
Idzi ndidzo nzira dzinozivikanwa kwazvo dzebhasikoro kuGerman. 7. September 2020
Zororo pajecha regoridhe reBulgaria zvinogoneka zvakare 25. August 2020
Zororo kuDenmark - Kufamba kuenda kuDenmark zvakare zvinogoneka pasina kugara kushoma 19. August 2020
Yako yekufambisa agency muPremnitz - Rathenow neBrandenburg yese
Zvave zvichitenderedza kubvira 1998 Travel agency Premnitz uye izvozvo Rathenow yekufambisa agency. Senzvimbo yako yekufambisa iripedyo, isu tinokuraira iwe pane ako ese ekufambisa zvaunoda uye nekupa isingaenzaniswi sevhisi, hunyanzvi mune kuraira, ruzivo rwakazara lwenzvimbo dzakasiyana siyana dzezororo uye neshungu yedu huru yekufamba! Vatengi vedu havangori chete vanobva kuRathenow nePremnitz asiwo kubva Brandenburg uye iyo yose Havelland.
Tinogona kufara kukuraira parunhare, neemail kana, zvirinani, pachedu mumahofisi edu maviri muRathenow muCity Center uye muPremnitz kuBergstrasse 46 (Nyika yeBrandenburg).
Sebasa rakakosha, iwe unogona kuronga yakatarwa kumutengi Saka iwe unogona kugara kumashure uye kuzorora uye kuwana zano pasina kumanikidzwa nguva. Titumire e-mail neyako yaunosarudza nguva mail@reisecafe-premnitz.de kana kutifonera pa03386 210110.
Iwe uchawana akawanda akasiyana zvikamu pakufamba pane webhusaiti yedu. Kana iwe uine chero mibvunzo, isu tichafara kukubatsira Iwe usazengure kutibata nesu.
pazasi Package inoshanya iwe unogona kuwana akasiyana einjini yekuchengetera iwe aunowana akasiyana Angebote inogona kuratidza dunhu, semuenzaniso. Under zvese zvinobatanidzwa iyo yazvino kufamba mafambiro inoratidzwa. Rudzi mhedziso yekupedzisira inokupa iwe runyorwa rwekushanyira nzvimbo dziripo parizvino. Kana iwe ukashandisa izvo zvakasiyana mafirita, iwe unogona zvakare kutora rwendo rwakazara kana kamwe chete pamhepo Bhuka hotera. Pasi pekupedzisira pfungwa Zororo kuGermany iwe uchawana tsananguro pfupi yenyika 16 dzemubatanidzwa ine chinongedzo kune kumwe kuona uye nzvimbo dzehoridhe kune imwe neimwe nyika.
Nei usingaite imwe cruise! Sarudza pakati pezvakasiyana Aida anopa kana kuwana ichangoburwa Aida yekupedzisira miniti View cruises. The Aida Cruises inoshanda akasiyana siyana Nzira yepasi rese. With the Aida Vario mutero gara zvako Rwendo rwekutakura hapana chinodiwa.
Iwe unogara uchibhururuka uye unofarira kuongorora kwako kwekushanyira iwe pachako. Isu bhuku Ihren Ndege yakarongwa kana Ndege yekutiza zvake. Unogona kushandisa nyore online cheki ita zvako pasina nguva refu dzakamirira kubhururuka inogona kukwikwidza.
Humwe hunyanzvi hwesarudzo yekufambisa Premnitz nedare rekufambisa Rathenow (Land Brandenburg) kufamba kwemitambo. Kana iwe uine famba ku Mitambo yeOlympic muJapan Tokyo 2021 kuronga kusanganisira matikiti emakwikwi emunhu, isu takakodzera kugarisana newe. Nekuti UEFA European Soccer Championship 2021 tinogona kukupa pasuru yakasanganisika pamwe nendege, hotera uye kupa matikiti emitambo yeumwe neumwe.
Premnitz Rathenow Brandenburg Zvinongedzo
Germany Tourism Association
Mashoko akakosha kubva muchikamu chekushanya
✅ Zvinobatanidza zvese zvinorevei?
Zvese zvinosanganisirwa zvinosanganisira kwete chete zvekudya asiwo zvese zvinwiwa zvinodhaka zvekunwa uye zvisina doro.
✅ Ndeipi yekupedzisira miniti?
Bhuka kweminiti yekupedzisira mwedzi mitatu kusvika mavhiki maviri kubva pawakatanga rwendo rwako. Pakati peino nguva pane mukana wekubika zvakachipa nzvimbo dzakasara kana nzvimbo dzakadzimwa.
✅ Chii chinonzi pururu yekushanyira?
Kana iyo yekubhururuka nehotera zvatoiswa mumutengo wekushanya uye kushanya kwakarongwa nemushanyi wekushanya, kunodaidzwa kuti kwepasuru yekushanyira. Kupfuurirwazve masevhisi epabheji yekushanya kunogona zvakare kuve kuendesa kuhotera kana zvikafu zvese zvinosanganiswa.
Agency Kufamba agency Premnitz - Rathenow nguva dzekuvhura?
Muvhuro - Chishanu kubva 9.00 am kusvika 18.00 pm Mugovera kubva 9.00 am kusvika 12.00 pm Yakavharwa paSvondo.
Rathenow yekufambisa agency
Guta Center, 14712 Rathenow
Facebook yekufamba cafe
Twitter Kufamba Cafe
Instagram cafe cafe
Youtube famba cafe
Kuzvikudza kunotungamirirwa neShokoPress | Musoro: Sydney naTenzi.